दुबई प्रहरीले श्रीदेवीको मृत्युको मुद्दामा दियो यस्तो जानकारी
दुबई, दुबई प्रहरीद्वारा श्रीदेवीको मृत्युको मुद्दा बन्द भएको जानकारी दिएको छ । दुबई प्रहरीले भारतीय चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी कपूरको शव उहाँकोे परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
परिवारलाई मृत शरीर हस्तान्तरण गर्नुपूर्व उहाँको मृत्युको मुद्दा दुबई प्रहरीले बन्द गरेको जनाएको थियो । सुरक्षित राख्ने आवश्यक उपाय गरेपछि उहाँको शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि भारत लगिने छ ।
भारतीय सिनेमा जगतमा पहिलो प्रख्यात नायिका श्रीदेवीको शनिबार राति दुबईको एक सुविधासम्पन्न होटेलको कोठाभित्र निधन भएको थियो ।
उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिन मानिसहरू श्रीदेवीको मुम्बईस्थित घरबाहिर व्यग्रताका साथ भेला भएका भारतीय टेलिभिजनले देखाएका छन् । -रासस÷पिटीआई
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन १५, २०७४२०:५९
हैजाको प्रकोपका कारण विश्वविद्यालय बन्द !
खतरनाक परमाणु हतियार बनाउदै रूस, अमेरिकालाई चिन्ता!
६० वर्ष पछि महिलाले किन्न पाउने भए रक्सी
बालबालिका बोकेको गाडीमा भएको आक्रमणमा दर्जनौँको मृत्यु !